[ISTICMAAL] Khariidadda raadinta kronavirus-ka khariidadda 26/02/2020
Inicio/Wararka/Khariidadaha Google iyo Khariidadda Dabagalka Kiiska Coronavirus (2020)
0 3.470 1 daqiiqo akhri
Soo hel Khariidadda Raadinta Kiiska Coronavirus.
Isticmaalayaasha Khariidadaha Google ayaa abuuray a khariiddada is-dhexgalka del hore ee coronavirus.
Qalabkani wuxuu diiwaangeliyaa oo muujiyaa afar ikhtiyaar oo ah hage dabagal ah. Fursadahaani waa: Dhibbanayaasha fayraska dilaaga ah. Kiisaska si rasmi ah loo xaqiijiyay. Kiisaska la tuhunsan yahay ee wali baaritaanka kujira ugu dambeyntiina kiisaska laga reebay aafadan suuragalka ah.
Markii laga hadlayo qalabkan, waa in la xoojiyaa in Google uusan wax shuqul ah ku lahayn khariidada ama sawirka isdhexgalka ama hindisaha khariidadan, waxaa la abuuray mahadnaq u ah isticmaaleyaal kala duwan oo ku abuuray khariidada mareegta Google "My Maps" ujeedadaas awgeed.
Hadday tahay mapa weli waa hawlgal buuxa waxaa laga yaabaa de utility weyn si looga fogaado suurto gal aagagga faafa mustaqbal macquul ah. Qiyaastan laga sameeyay Isticmaalaha ilaa Isticmaalka waxaa lagu cusbooneysiiyaa waqtiga dhabta ah waana loo oggol yahay La soco qiyaas ahaan.
Si la mid ah sidoo kale mid kale ayaa jira khariidad is-dhexgal ah si loo hubiyo horumarka cudurka. Khariidadan labaad waxaa ku jira a ku qor tirada kiisaska waana ka sii dhammaystiran tahay.
Qalabkani wuxuu ka kooban yahay isku-dubbarid dhammaystiran oo isku-duwidda xogta laga helay Xarumaha Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada ee Mareykanka, CDC. Laga soo bilaabo WHO, (Ururka Caafimaadka Adduunka), Xarunta Shiinaha ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CCDC), Xarunta Yurub ee Kahortagga iyo Xakamaynta Cudurrada iyo websaydhka Shiinaha ee DYX. Kan dambe wuxuu ku darayaa xogta Guddiga Salaanta Qaranka Shiinaha iyo CCDC ee aan kor ku soo xusnay.
Johns Hopkins khariidada coronavirus. Kiisaska Dunida
Natiijooyinku waxay ku jiraan waqti dhab ah waxayna bixiyaan sawir sax ah iyadoo laga soo ururinayo macluumaadka hay'adahaas kala duwan. Xidhiidhada khariidada raadinta kiisaska coronavirus
Halkan nooca loogu talagalay Desktop (PC)
Halkan waa nooca loogu talagalay Qalabka Qalabka
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso:
Mustaqbalka daawada ayaa rajo ka leh Sirdoonka Cilmiga ah
Khariirada fayruuska corona waqtiga dhabta ah khariidadda coronavirus khariidada horumarka coronavirus khariidada faafa ee coronavirus horumarka khariidadda coronavirus khariidadda cudurka coronavirus khariidada raadinta kiisaska coronavirus Khariidadda raadraaca fayraska dabagalka kiiska coronavirus
Waa tee antivirus-ka ugu fiican?
Sidee lacag loogu helaa sheekeysiga?
Codsi si aad u daawato cayaaraha tooska ah [Taleefannada gacanta iyo PC-yada]
Miridhku mobilka (Beddelka)
Saddexda adeege ee ugu fiican ee lagu ciyaaro Rust
Talooyin ku saabsan ciyaar miridhku [Baro iyaga]